Apple wuxuu sii daayaa Beta 4 ee macOS 10.12.6 loogu talagalay Soo-saareyaasha | Waxaan ka socdaa mac
Apple wuxuu sii daayaa macOS 4 beta 10.12.6 ee loogu talagalay horumariyeyaasha
Galabta macOS Sierra 4 beta 10.12.6 ayaa loo sii daayay horumariyeyaasha. Runtu waxay tahay inaan dhamaanteen sugeyno nooca dadweynaha ee macOS High Sierra beenna ma sheegayo haddii aan iraahdo dhamaanteen waan ka wada warqabnaa marka loo eego nooca hadda jira ee Mac OS. aad ku socotaan xawaare fiican waxaana macquul ah inaad tahay lagu hirgeliyey hagaajinta hawlgalka nidaamka iyada oo la hagaajinayo cilladaha caadiga ah waxaa ka mid ah wax yar oo ka mid ah in lagu daro macOS Sierra ka hor inta aan loo boodin nidaamka cusub ee hawlgalka ee ay soo bandhigtay Apple bishii Juun 5 ee WWDC.
Waxaan in mudo ahba ku jirnay noocyada beta ay bixiyaan ciladahaas bug iyo wax kale oo yar, marka ma dhihi karno wararka ayaa la muujiyey. Dhinaca kale waxaan horeyba u dooneynaa inaan isku dayno qaar ka mid ah astaamaha cusub ee macOS-ka soo socda waana sababtaas waxaan dhamaanteen rajeyneynaa beta bulshada ee nooca cusub midka hadda jira.
Sida had iyo jeer ah, way fiicantahay inaad ka joogsato noocyadan beta haddii aadan ahayn horumariye illaa nooca dadweynaha la sii daayo, maadaama aan heli karno xoogaa dhibaatada iswaafajin la'aanta codsiyada ama qalabka shaqada. Noocyada beta ee la siidaayay badanaa waa kuwa xasilloon oo ilaa maantadan la joogo, ma muujiyaan khaladaad saameeya shaqeynta nidaamka ama wixii la mid ah, laakiin waa inaanan ilaawin inay yihiin noocyada beta waana ka wanaagsan tahay inaad ka taxaddartaa iyaga xitaa in kasta oo ay xasilloon yihiin oo aaney ku darin astaamo cusub oo shaqeynaya oo saameyn ku yeelan kara hawlgalka Mac.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » macOS Sierra » Apple wuxuu sii daayaa macOS 4 beta 10.12.6 ee loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple Pay waxay lahaan doontaa dhacdadii ugu horreysay ee 'lumiso Wallet'ada San Francisco
Haddii aad jeceshahay jilistayaasha gawaarida, waxaad ku raaxeysan doontaa Truck Simulator Europe 2 Premium